Misy fiangonana zandriny manarama olona
Saro-piaro amin'ny Sakramenta ny Eglizy Katolika ary tandrovany fatratra izany.
Gagagaga daholo ny iray fiangonana hahita ny pretra nanavatsava ny lalantsara ary namonjy ny ôtely masina indray avy eo. Paroasy iray eto an-drenivohitra no nise nisehoan'io tranga io omaly nandritra ny lamesa maraina. Nandray fitenenana kosa ity pretra ity mialoha ny tso-drano ary namaky bantsilana fa tsikariny ny olona iray nandray no mofo ka tsy nihinana izany fa nitondra ny hôstia teny am-pitoerana. Nazavainy tamin'ny rehetra fa efa miely any Fianarantsoa any izao ny fiangonana zandriny manarama olona haka ireny hôstia ireny ka hitondra izany any. Araka ny voalazan'ity pretra ity ihany koa dia an-tapitrisa ny vola omena ny olona hanao izany. Tsy fantatra na karama io na vidin'ny hôstia.
Efa maro ireo fiangonana zandriny sy antokom-pivavahana mijoro etsy sy eroa ankehitriny ary tena manita-tsaina tokoa mba hisarihana olona marobe anaty haratony. Tsy efa azo lazaina ho blasfemia ve izany mividy ny "Vatana aman-dran'i Jesoa Kristy" izany. Hatramin'izay nisian'ny tantara dia tsy mbola fahita sy andre ny hoe olona mividy mofo efa voahasina.
Ekena fa maro ny lalana iantsoan'Andriamanitra ny olona saingy misy kosa ireo sasany izay manao dika vilana ny voalazan'ny Soratra Masina. Maro ireo olona nisintaka niala tamin'ny fampianaran'ny Eglizy ka nanorina ho an'ny tenany ary tena manarato olona ara-bakiteny. Misy kosa ireo izay hita fa mandrirotra ny ampahan-tSoratra Masina fotsiny ihany ka manao andininy ho lasa teny filamatra ary tena mahavita manasa atidoha mihitsy. Ekena fa mafy sy henjana ny fitsipika sy ny lalàna apetraky ny Eglizy, arofanina ihany koa izy ireny mba tsy hihoran'ny ondry ny tetezana. Fitaizana ny fanahy avokoa ireny.
Mila malia kos ny tsirairay ka manao am-po mihitsy ary mangataka amin'Andrimanitra hoe "ampianaro aho Tompo hahay hizaha toetra ny fanahy". Voaporof tokoa fa efa miely eny rehetra eny ny antikristy ary manely fampianaran-diso ary ireo olona tsy miorina amin'ny finoana dia mora voatarika ka mandray izany. Tsy tsotra ve ny mandrisika ny olona ka miteny hoe "Fa katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo ny zava-drehetra"? Aoka tsy hoadino rey olona fa Andriamanitra anie ka manome malalaka ary manome betsaka fa isika mihitsy no tsy mahay na tsy mety handray fa mitsiriritra ny ananan'ny hafa fotsiny e. Finoana sy fahatokiana no tadiaviny aminao, amintsika rehetra. Tandremo ary tsy ho voafitaka fa ny ratsy koa mahay manao ankosotra kanefa vetivety ihany ny faharetany ka rehefa miseho ilay mangavoka fa vao gaga isika fa hay nitondra tany amin'ny fahaverezana ilay ilay namiratra teo fa tsy ilay nitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Mahereza amin'ny fiainam-bavaka !
Misy mahasahy mividy lafo ity mofo ity rehefa voahasina